Interview With U WIn Tin – Opposition not needed anymore in Burma? | MoeMaKa Burmese News & Media
Interview With U WIn Tin – Opposition not needed anymore in Burma?
Tags: ကချင်, မာမာအေး, ပြည်တွင်းစစ်
Aung Din – Burmese Regime Hluttaw in Perspective – 17 (0)
One Response to Interview With U WIn Tin – Opposition not needed anymore in Burma?
AT on April 18, 2013 at 4:08 pm
မြန်မာ့ရှေ့ခရီးကတော့ သိပ်မလွယ်လှပါဘူး။ စစ်တပ်က မလွယ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ စစ်တပ်က သူ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ သူရှိနေပါတယ်။ လမ်းကြောင်း ပျောက်နေ၊ လမ်းကြောင်း မှုံနေ၊ လမ်းကြောင်း ရှုပ်နေတာက ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေပါ။ ဆရာဦးဝင်းတင်ရဲ့ ပြောကြားချက်ကို ဖတ်ပြီး မိမိဖာသာ ကောက်ချက်ဆွဲနိုင်ကြပါတယ်။